Indlela yokudla yezinsuku eziyiSikhombisa yama carbs amancane -
Indlela yokudla yezinsuku eziyiSikhombisa yama carbs amancane
Ukuhlelela indlela yokudla kusiza kakhulu, kodwa kuze kube imanje, besingakabi nayo indlela yokuhlela ukudla yama carbs amancane ebesingayabela nina. Kodwa ke namhlanje lokho sekushintshile njengoba ungakhetha phakathi kwe balanced meal plan esuka esitolo sakwa Pick n Pay, okanye le five-healthy-meal-plans-for-diabetics/”ns yona esuka kwa Sanofi ( ehlanganisa abadla izitshalo kuphela, abongayo kanye neyabase Ndiya) bese futhi kuba eyama carbs amancane, kanti ke lezi ezimbili izinhlelo zokudla zezinsuku eziyisikhombisa zisuka ku Banting. Kahle kahle nje kunezinhlelo zawo wonke umuntu akekho osele ngaphandle!
Lana ke nazi izinhlelo ezimbili zokudla zama carbs amancane okungakhethwa kuzona kusuka kwe: Zezinsuku eziyisiKhombisa, bese kuba ezokonga zazo izinsuku eziyisikhombisa nazo. Sicela ucofe kwi “link” engezansi kwesithombe. Ukuze uthole imniningwano ethe xaxa, ngena lana an easy way to eat low carb kanye nalana low carb-fat-protein diet debate, kanti ke ungaphinde futhi ubheke lana izinto zakho low carb diabetic pantry.
Uhlelo Lwezinsuku Eziyisikhombisa Lwama Carbs Amancane
Uhlelo Lokudla Lwama Carbs Amancane Lwabongayo
Amacebo ngendlela yokudla “Banting” yawo wonke umuntu
Lezindlela zokuhlela indlela yokudla zezinsuku eziyiSikhombisa zisuselwa kwincwadi Banting 7 Day Meal Plans book: yona enekhulu (100) nangaphezulu zezindlela zokupheka ezithakasela abantu abangaphezu kweSigidi kanye nesiKhombisa (1.7 million) ngaphezulu. Lencwadi ke inikeleza ngezinhlelo ezifana ne Budget Banting, izindlela zokudla, amasu, kanye namaqhinga.
Lencwadi ayibhaliwe ososayensi, okanye abahlengikazi, kanye nezincweti kwezokudla kodwa ihlanganiswe abantu abathathu abathatha isinqubo sokuthi bake bacubungule kahle izimpilo zabo. Baphethe ikhasi elisenkundleni yezokuxhumana uFacebook Banting 7 Day Meal Plans Facebook group, linjalo nje lilandelwa izinkumbi zabantu ezingaphezi kwezigi ezimbili nesigamu (2.3 million), okuyilona qoqo elinabantu abaningi emhlabeni wonke elimayelana nezempilo mayelana nokudla.